Ungayifaka njani ihempe yomntwana wehlobo? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokubopha intombazana yentombazana yehlobo
Ndingakunika le nguqulo yehoti entle yehlobo kwintombazana eneekreyti. Yinto evulekileyo nentyatyambo. Khetha nawuphi na umbala wokungcamla, i-pastel shades eziethe-ethe zihle kakhulu. Isigqoko esifanayo sasisengumntwana.
Siqala ukubopha umnqwazi ovulekileyo.
Emva koko bopha isigqoko ngokwalo mdwebo:
Imiqolo emibini yokugqibela iphindaphindwe kubunzulu obunqwenelekayo.
Ihlala iyingca yeentyatyambo kwaye iyithunga kwisigqoko. Ngethamsanqa
Sele ngaphambi kwehlobo kukho kuphela iintsuku ezimbalwa kwaye wonke umntu ufuna ukunxiba abantwana bakhe ngendlela ekhethekileyo, entle nenhle. Ukuhonjiswa okugqwesileyo kunye nesigqoko sehlobo kunokuba sisigqoko sabantwana, esigwegwe.
Ndifuna ukukunikezela kwi-crochet enhle kangaka yehlobo kwintombazana:
Nantsi into ekufuneka uyithathile ukuze udale umnqwazi:
Amanqanaba okubopha iminqwazi zethu:
Zininzi iimodeli zekhephu zasehlotyeni ezikhoyo, kwaye zonke zintle kangangokuba amehlo akho abaleke ngokubanzi, ufuna ukugoba yonke into ngaxeshanye. Nazi ezinye zeemodeli zekhephu ezijijileyo ngeepateni, ungazikhetha ngokwakho.
Imibala enemibala emininzi yomntwana ononyaka omnye.
Iikati ezivela kwimisonto yemisonto eyahlukileyo ngokwemeko yenkqubo1. Isikimu 2 kunye ne-3 - kwintyatyambo exutywe ngayo isigqoko.
I-Beanie ene-Qu; i-Pineapplesquot; umnqwazi kunye nomda we-sirloin. Ilungele nawuphi na ubudala, ubungakanani bunokwenziwa ngokwahluka, kuxhomekeke kubukhulu behuku kunye nomsonto, kunye nobubanzi be-mesh ezantsi kwekepusi.
Isikhafu se-Mesh kunye nentyatyambo.
Ndicinga ukuba akukho buhle butsha buya kunqaba ukunxiba isuti entle kangaka. I -cheche, ngumnqamlezo phakathi kwe-bonnet kunye ne-panama hat. I-cap ikhusela ngokufanelekileyo intloko yomntwana elangeni elitshisayo kwaye kwangaxeshanye isebenza njengomhlobiso. Ubungakanani bengubo yephaneli yentombazana eneminyaka emithathu. Siza kudinga i-hook 3 kunye ne-50 yeegrem zephunga. Ke
Ukuba uqhele ukuqinisa ngakwipatheni, nceda ufunde:
Ndifuna ukongeza ngokwam ukuba le hat ibinenye into engenakukhutshwa - ifanela ngokulula, ubukhulu becala, kuya kufuneka ubophe imitya, kwaye emva koko uyiqokelele kwaye uyibophe ngesaphetha.
Ndifumene ividiyo kwi-Intanethi ngokunxibisa isuti entle yasehlotyeni kunye nee-daisies.Le hat yeyentombazana enezinyanga ezi-6.
Ividiyo eyahlukileyo kwi-chamomile ezinokubhabha ngamagqabi.
Ezinye izigqoko ezimbalwa zehlobo kwintombazana le.
Omnye umnqwazi wentlanzi.
Le cap iqhagamshelwe kwindawo nganye.
Inkcazo eneenkcukacha zokuqhawula kwakhe apha.
Enye umnqwazi omnandi.
Nantsi umnqwazi webhendana.
Omnye umnqwazi opholileyo kwaye onomdla.
oh enkosi kakhulu ngengcaciso eneenkcukacha, ndizamile kuphela ukugoba ii-booties, kodwa ngoku ndifunda eli nqaku http://mysekret.ru/vyazanie/vyazanie-kryuchkom-dlya-detej.html ndifuna ukuzama umnqwazi wentombi yam.
Nasi isithsaba sehlobo esithandekayo kwintombazana onokuthi uzibambe ngayo ngegwegwe.
Hook 1,5. Iinyanda ziyi-acrylic.
Njengazo zonke iisheyithi, siqala ukujija ukusuka phezulu, ukusuka entloko.
Sibhinqe ngokwenkqubo. Okokuqala, siqokelela ii-loops zomoya ezi-5, ukuvala ukusuka kwindandatho kwaye ubophe ii-9 ii-PC.
Siyaqhubeka nokutshixeka ngokweskimu ukuya kubunzulu obunqwenelekayo benqwelomoya.
Uwugqibile umsebenzi ngokubopha umphetho wepanama ngeekholamu ezintathu ezizodwa kunye nephethini evulekileyo ngokwenkqubo.
Le yeyona ndlela ilula yokuqhwaba intombazana yasehlobo ngentombazana. Kukho ezinye ezintsonkothileyo onokubona apha.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,339.